Ahoana ny fampiasana ny findainao ho toy ny Nintendo Switch Controller | Androidsis
Ahoana ny fampiasana ny findainao ho toy ny mpanova Nintendo Switch
DaniPlay | 18/08/2021 08:36 | Nohavaozina amin'ny 19/08/2021 20:22 | Fampiharana Android, Tutorials
Nintendo dia nanatontosa konsoly horonantsary natao hampiasaina tato ho ato ary ankafizo ireo mpanaraka an-tapitrisany anao manerantany. Ny console farany natolotry ny orinasa dia ny Nintendo Switch, sehatra hybrid izay ahafahanao milalao amin'ny efijery 6,2-inch, fa amin'ny fahitalavitra ihany koa.
Ny orinasan-japoney dia nanalavitra an'i Sony sy Microsoft hatrany, hany ka tsy nampitahaina ny fampiononany amin'ny resaka fitaovana miaraka amin'ireo natomboky ny roa hafa. Ny ampahany lehibe amin'ny console dia ny fifaliana-ConRehefa fantatra ny knob amin'ny sisin'ny tontonana dia azo esorina izy ireo ary ampiasaina toy ny pad mahazatra.
Androany noho ny teknolojia ny finday dia azo ampiasaina ho toy ny mpanova Nintendo Switch, izany rehetra izany dia noho ny rindranasa noforonin'i DeepBlue Labs. Manadio izany ny fifehezana virtoaly amin'ireo kinova samihafa navoaka hatreto, eo ambanin'ny sarintany sy endri-javatra vaovao avokoa.
1 JoyCon Droid
2 Ao amin'ny kinova Alpha
3 Fametrahana ny JoyCon Android, dingana voalohany
4 Dikan-teny karama
5 Ampiasao ny NFC hanararaotra anao
6 Fepetra ilaina amin'ny filalaovana JoyCon Droid
Miaraka amin'ny app JoyCon Droid dia azonao atao ny mamadika ny findainao Android ho mpanara-maso Nintendo console, hanahaka ny JoyCon mahazatra ary na dia ny karazany efa mandroso aza. Ny voalohany dia ilay nampiasaina tao amin'ny konsole portable fanta-daza fantatra amin'ny hoe JoyCon, ny faharoa dia fifehezana "Pro Classic".
Ity pad virtoaly ity dia manan-kery rehefa mampiasa azy io ho fanampiny, satria na dia miasa tsara aza dia tsara kokoa ny manana «ara-batana». JoyCon Droid dia iray amin'ireo safidy hafa raha te-hilalao amin'ny namantsika isika tsy mila mividy mpanara-maso amin'izany fotoana marina izany.
JoyCon Droid setup dia tsotra be, handalo ny fisintomana azy io sy handrindrana ny bokotra fihetsika, izay efa namboarin'ilay console. Mety raha te hilalao toy ny mahazatra anao amin'ny sehatra Nintendo ianao mandra-pahatongan'izany fotoana marina izany.
Ao amin'ny kinova Alpha
Hatreto dia mbola ao amin'ny kinova Alpha ny tetikasa, noho izany dia hita hatrany fa mandroso mandritra ny dingana samihafa. Ny kinova beta, raha havoaka amin'ny farany, dia ho iray amin'ireo dingana lehibe, satria mila dingana lehibe aorian'ny fiandrasana mafy.
Ny fampiharana dia miasa tsara amin'ny lalao rehetra, ny zavatra tsara indrindra dia ny hametahana ny bokotra rehetra, farafaharatsiny ireo ampiasaina ho hetsika, satria ny crosshead dia hikirakira ny lohateny rehetra ary tsy ilaina ny mampifanaraka azy. Ho ampy ny hampifangaroana azy, ary avy eo afaka hikasika ny toe-javatra fampiharana.
Misy fatiantoka io, tsy mandeha amin'ny finday rehetra izy io, na dia amin'ny ankamaroan'izy ireo aza izany, ka ny zavatra voalohany dia ny manandrana azy amin'ny telefaona ampiasainao ho toy ny lehibe indrindra. Amin'ny kinova finday teo aloha dia mandeha tsara izy io, ary izany dia mitranga amin'ny vaovao ihany koa, saingy hiovaova be izany arakaraka ny marika sy ny maodely.
Fametrahana ny JoyCon Android, dingana voalohany
Ny dingana voalohany miaraka amin'ny JoyCon Android dia mora, indrindra ho an'ny fametrahana ity fitaovana fanta-daza ity izay hifehy ny Nintendo Switch amin'ny alàlan'ny findainao. Ny fampiasana azy dia ho lasa fanahafana tonga lafatra, miasa daholo toa ny hoe mampiasa Nintendo JoyCon tany am-boalohany ianao.
Ny zavatra tokana tokana dia ny fiarahana amin'ny pairing, fa raha vao misy izany dia mandeha tsara ny zava-drehetra, satria ny fampiharana dia matetika ampiasaina ho safidy faharoa amin'ny fanaraha-maso lavitra tany am-boalohany. Ny JoyCon ara-batana dia mizara roa matetika, ary avy eo ampiharina amin'ny lafiny roa amin'ny efijery izay miaraka amin'ny lalao console.
Mba hametrahana azy dia ataovy izao:
Ampidino JoyCon Droid avy eto, dia tsy hita ao amin'ny Play Store intsony rehefa nampiantrano nandritra ny herintaona mahery
Raha vao sintonina dia hiroso amin'ny fametrahana azy io, omeo alàlana ary omeo alalana Bluetooth noho ny fahafinaretana
Safidio ny JoyCon hanahaka, na ny ankavia na ny ankavanana, tsy miraharaha io, azonao ampiasaina ilay mety aminao indrindra amin'izao fotoana izao, manana safidy koa ianao hisafidy ny kinova «Pro», izy no mpanara-maso tonga lafatra mba hananana tombony betsaka amin'ny lohateny rehetra
Tsindrio izao amin'ny «Taty aoriana» dia haseho ny baiko voafidyRaha nanao hadisoana ianao ary te hisafidy iray hafa, dia azonao atao ny miverina, manaova fomba fiasa mitovy amin'izany amin'ny fikitihana «Aorian» hankanesanao any amin'ilay pad voafidy
Ary amin'ny tsindrio Nintendo Switch eo amin'ny kisary mpanara-maso, ny fahefatra amin'ny ankavia dia hampiseho ny sary famantarana JoyCon
Ao amin'ny console, kitiho ny «Change the order or the clamping mode»
Vantany vao vita io dingana io dia hasehon'ny telefaona anao ny fangatahana fampirafesana amin'ny Nintendo Switch, ekeo
Vantany vao vita ny pairing dia hasehon'ny console anao ny telefaona mavitrika ho toy ny pad JoyCon, afaka mifehy tanteraka ny console sy miaraka aminy koa ny lalao rehetra mba hifanaraka amin'izy rehetra
Ilay kinova fantatra amin'ny anarana hoe Pro dia mitentina 5,99 euro amin'ny famongorana ireo dokaNa dia vitsy aza dia mendrika ny fanohanan'ny developer. Azonao atao ny mampiasa azy amin'ny fomba feno nefa tsy mila mandoa izany vola manodidina ny 6 euro izany, fa hanaisotra ny doka amin'ny fampiharana hatrany.
Ny tsara indrindra dia ny fanandramana voalohany fa mandeha tsara amin'ny telefaona nametrahanao azy izy, satria tsy manam-paharoa sy maharitra io fandoavana io, mandrakizay. Azo ampiasaina amin'ny telefaona marobe miaraka amin'io lisansa io rehefa manafatra ny fototra, anisan'izany ireo adiresy mailaka fisoratana anarana.
Ho tonga ny fanavaozana araka ny DeepBlue Labs, ilay tompon'andraikitra amin'ny tetikasa, izay amin'izao fotoana izao dia namoaka fanitsiana maro. JoyCon Droid dia natao hampiasaina haingana ary miaraka amina dingana vitsivitsy monja, aorian'ny fanaovana izany dia hiroso haingana kokoa amin'ny alàlan'ny fanokafana ny fampiharana sy ny fidirana amin'ny toeran'ny Nintendo Switch.
Ampiasao ny NFC hanararaotra anao
JoyCon Droid dia mampiasa ny teknolojia NFC hamaky ny Nintendo Amiibos, mety raha te-hihazona azy ireo amin'ity rindrambaiko Android virtoaly ity ianao. Ny fampiasana dia mitovy amin'ny pad ara-batana, noho izany ny fahazoana Amiibo dia ho tsotra toy ny hatramin'izay.
Amin'ny ho avy dia hitohy ny fampiasana ny NFC satria tsara izany raha te handoa vola ianao, ao anatin'izany ny fandoavana ny metro, ny bus ary koa ny fividianana vokatra any amin'ny magazay. Miaraka amin'ny JoyCon Droid dia azo ampiasaina rehefa mividy Amiibos iray na maromaro amin'ny fampifandraisana fotsiny ny lavitra amin'ny console.
Fepetra ilaina amin'ny filalaovana JoyCon Droid
Ny iray amin'ireo fepetra voalohany ilain'ny JoyCon Droid hiasa dia ny fananana Android 9.0 na kinova ambonimbony kokoa, raha manana kinova ambany izy dia tsy mazava ny asany. Ny kinova amin'ny rafi-pandidiana Android dia zava-dehibe satria mifanaraka amin'ny fanavaozana JoyCon Droid farany.
Fepetra iray hafa tokony hiasa 100% ny fampiharana dia ny fananana ny Profile Bluetooth HID Profile, raha tsy izany dia tsy maintsy mamorona profil isika. Ny dingana hanaovana an'izany dia ny mampifandray profil iray amin'ny fifandraisana Bluetooth, raha efa namorona azy teo aloha ianao, miditra fotsiny ary araho ny dingana hiasa JoyCon Droid.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fampiasana ny findainao ho toy ny mpanova Nintendo Switch
Cubot MAX3 vaovao: 6,95 santimetatra ary fakan-tsary 48 MP ho an'ny $ 99,99
Ny rôma Android Android 11 tsara indrindra hilalao kilasika